Lafo amin’ny mpanjifa: tsy mihetsika ho 3 000 Ar ny kilaon’ny vary | NewsMada
Lafo amin’ny mpanjifa: tsy mihetsika ho 3 000 Ar ny kilaon’ny vary
Lafo ho an’ny mpanjifa ny vidim-bary ankapobeny amin’izao fotoana izao. Tena mahazo tombony amin’izany ny mpanangom-bokatra sy ireo manana tahirim-bary betsaka, indrindra ny any Alaotra.
Ao anatin’ny vanim-potoana maitsoahitra isika ankehitriny. Tsy ampy ny tolotra vary raha oharina amin’ny tinady, mahatonga azy ho lafo, manodidina ny 3 000 Ar ny kilaon’ny makalioka sy ny vary gasy mena. Manodidina ny 2 600 Ar kosa ny vary gasy hafa, toy ny dista, ny tsipala, ary ny vary hafarana avy any ivelany.
Hita fa mihamitombo kosa ny mpividy ny vary mora, 1 200 Ar ny kilao amidy eny amin’ny Tsena mora sy ny mpaninjara vitsivitsy eto an-dRenivohitra. Nosokafana tamin’ity herinandro ity koa ny any amin’ny faritra, toy ny any Toliara. Mitaraina ny mponina any ambanivohitra satria tsy mba misitraka ity vary amidy mora avy amin’ny fanjakana ity nefa izy ireo no tena miaina anaty fahantrana lalina sady maro anisa. Satria mipetraka any ambanivohitra ny 80%-n’ny Malagasy.
Simba ny fotodrafitrasa any atsimon’Alaotra
Mikasika ny fambolem-bary, toy ny any Alaotra, ohatra, manomboka mitsiry ny vary vakiambiaty, naketsa mialoha ny 15 febroary teo. Nilaza ny minisitry ny Fambolena, Ranarivelo Lucien, fa vita ketsa ny 100%-n’ny any amin’ny tapany andrefan’Alaotra, indrindra ny any Amparafaravola. Tsy vita tanteraka kosa ny any amin’ny tapany atsimo, misy ny PC 15, ny Vallée Mariane, satria simba ny tohodrano.
Ezaka ataon’ny minisitera ny manatsara sady nohamafisina ny fotodrafitrasa, toy ny any Anony, Amparafaravola, i Bevava, sns. Tafiditra ao anatin’ny tetikasa Fihariana voka-bary ataon’ny fanjakana izany. “Koa antenaina fa ho tsara ny vokatra amin’ity taom-pambolena 2020-2021 ity, na tara aza ny firotsahan’ny orana”, hoy ihany ny minisitra.